Ifulethi Elinethezekile Eliseduze Nebhishi ne-Promenade
Świnoujście, Województwo zachodniopomorskie, i-Poland
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Piotr
Iholide ngesikhathi se-COVID-19 lingaphepha: isibulala-magciwane sihlanganisa + izindlela zokuphepha ezikhethekile ezisetshenzisiwe.
Iphelele iholide nomndeni noma abangani - 65 sq m. Igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili + Igumbi lokulala elinombhede omkhulu wabantu abangu-3 + Igumbi lokuhlala elinombhede kasofa onethezekile + Ikhishi eline-microwave, ihhavini, umshini wokuwasha izitsha nesiqandisi esikhulu + Igumbi lokugezela elinethezekile elineshawa + Igumbi lokusetshenziswa elinomshini wokuwasha + Ithala elikhulu elinethala izihlalo zedekhi netafula.
- Ibhishi laseBaltic 50m kuphela
- Aqua Park kuphela 25m
Indawo ekahle yokuphumula ngasolwandle yawo wonke umuntu othokozela ukunethezeka nokunethezeka. Indawo eyingqayizivele engxenyeni entsha ye-Swinoujscie. Amamitha ambalwa nje ukusuka olwandle futhi eduze nendawo yolwandle, izindawo zokudlela eziningi, amathilomu kanye nezindawo zokuzijabulisa zika-ayisikhilimu.
- Igumbi lokulala elikhulu, igumbi elivulekile elinombhede ophindwe kabili, ikhabethe elikhulu, indawo yokugqoka izingubo, kanye nomnyango oqondile wethala.
- IGUMBI LESIBILI LOKUlala lifakwe umbhede osetshenziswa abantu abangu-3, ikhabethe lezingubo zokugqoka kanye nekhabethe elinamakhabethe. Igumbi linokufinyelela okuqondile kuthala.
- IGUMBI LOKUHLALA elinombhede onethezekile, usofa, isihlalo sokuzivikela, itafula nesikhungo sokuzijabulisa (i-Smart TV, iDVD, uhlelo lwe-cinema yasekhaya).
- IKITCHENETTE, ihlome ngokugcwele, ine-microwave, ihhavini, umshini wokugeza izitsha, ifriji, i-induction hob, igedlela likagesi kanye nemishini yasekhishini egcwele (amapuleti, amabhodwe, izinto zokusika). Phakathi kwegumbi lokuphumula nekhishi kunetafula elikhulu elinezihlalo.
- I-SUNNY TERRACE, enefenisha yasengadini, i-swing kanye ne-chaise longue ethokomele. Indawo enkulu kakhulu yokushisa ilanga, ukudla ndawonye nokudlala.
I-Swinoujscie Beach Promenade iyindawo enamandla futhi eyakhayo, inhlanganisela yesiko kanye nesimanjemanje. I-boulevard yangaphambi kwempi engasemngceleni wendawo ye-spa iheha ngezinto eziningi ezikhangayo, njengamakhonsathi, imidlalo yamaciko asemgwaqweni, kunezindawo zokudlela eziningi, amathilomu, nezindawo zokuzijabulisa zika-ayisikhilimu. Eduze kwefulethi uzothola i-Baltic Park Molo Aquapark, lapho uzolahlekelwa khona ku-Aqua madness, kungakhathaliseki izinga lokushisa loLwandle iBaltic.
Singakuthola kukho konke ukuhlala kwakho. Uma udinga noma yiluphi usizo, isibonelo, izinsiza ezengeziwe zokuhlanza, sicela usithinte.
Hlola ezinye izinketho ezise- Świnoujście namaphethelo